उत्तर प्रदेशमा मोदी कि राहुलको पल्ला भारी होला ? | NepalDut
उत्तर प्रदेशमा मोदी कि राहुलको पल्ला भारी होला ?
भारतमा केन्द्रीय सरकार गठन गर्ने लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनसँगै भारतमा कसको सरकार बन्छ भन्ने अनुमान सुरू भएको छ। भारतमा सरकार गठनका लागि सबैभन्दा धेरै प्रभाव उत्तर प्रदेशको नतिजाले पार्छ। ५ सय ४२ सिट मध्ये उत्तर प्रदेशमा मात्र ८० सिट छ।
गत निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले ८० मध्ये ७१ सिट जितेको थियो। हिन्दु बहुल उत्तर प्रदेशमा धार्मिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। त्यसमाथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं पनि उत्तर प्रदेशको बनारसबाट निर्वाचन लडेका छन्।
त्यस्तै भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी पनि उत्तर प्रदेशकै अमेठीबाट निर्वाचनको दौडमा छन्। भारतमा कथन छ ‘जसले उत्तर प्रदेश जित्छ उसले सरकार बनाउँछ।’ भारतको उत्तर प्रदेशले अहिलेसम्म भारतका लागि नौ प्रधानमन्त्री दिइसकेको छ। झण्डै बेलायतको आकारको उत्तर प्रदेशनै भारतीय लोकसभा निर्वाचनको केन्द्र हो। तर यसपटक उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीलाई पहिलाको जस्तै नतिजा दोहोर्‍याउनु कठिन छ।
उत्तर प्रदेशका दुई कट्टर दुश्मन पार्टी मानिएका बहुजन समाज पार्टी(बिएसपी) र समाजवादी पार्टी(एसपी)ले गठबन्धन गरेका थिए। यसले मोदीको बिजेपीलाई धक्का दिन सक्छ।